पञ्चेबाजा सहित बेहुला बेहुलीको घर पुगे, बेहुलाले आँगनमा टेके लगत्तै बेहुलीको मृ, त्यु ! » बुद्ध भूमि नेपाल
Home/समाचार/पञ्चेबाजा सहित बेहुला बेहुलीको घर पुगे, बेहुलाले आँगनमा टेके लगत्तै बेहुलीको मृ, त्यु !
बेहुलीका बा आमा अचेत बने । प्रहरी थाना प्रभारी विजयबहादुर वर्मा र उपनिरीक्षक शैलेन्द्र कुमार घटनास्थल पुगेर शवलाई पोष्ट मार्टमका लागि पठाएका छन् । पो ष्टमार्टम रिर्पोटपछि मात्रै घटनाका विषयमा थप बोल्न सकिने प्रहरी थाना प्रभारी विजयबहादुर वर्मा र उपनिरीक्षक शैलेन्द्र कुमारले बताए । Source:nipolnews